Covid 19 ကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုကို တုန့်ပြန်ခြင်း
Economic Downturn Management နှင့်ပတ်သက်ပြီး Strategy Discussion သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
လတ်တလောမှာ ပဲ တရုပ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ကစခဲ့တဲ့ Covid 19 ကို WHO က Pandemic အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ကမာ့လုံးမှာ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ကျဆင်းတဲ့အရိပ်ပြနေရာ ကနေ ကျတဲ့ဖက်ကို ဝင်လာပါပြီ။ ရေနံစျေးနဲ့ Stock စျေးကွက်တွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (CNBC သတင်းမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၀ရက်အချက်လက်များအရ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲ ကုန်ကြမ်းမရမှုပြသနာ၊ ငွေစျေး (အကျ)မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ ခရီးသွားအဝင်နည်းပါးမှုက လုပ်ငန်းတွေကို သိသိသာသာထိခိုက်လာပါပြီ။ Economic Downturn လို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုထဲမှာရောက်နေမရောက်နေ ကတော့ ဟောကိန်းမထုတ်လိုပါဘူး။ တကယ်လို့သာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှု down turn ထဲဝင်လာခဲ့ရင် ဘာတွေကြိုစဉ်းစားသင့်လဲ ဆွေးနွေးပါရစေ။ MBA မှာ PESTLE ဆိုတာကို အလကားဆွေးနွေးကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
၁. Customer များ - Customer တွေက ပိုပြီးစျေးသက်သာတဲ ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ကြမလား။ (ဥပမာ Brand တစ်ခုထဲမှာတင် ပိုစျေးသက်သာတဲ့ Model ကိုရွေးချယ်တာမျိုး) ဒါမှမဟုတ် ဝယ်တဲ့ကြိမ်နှုန်းကိုလျော့ချကြမလား? (တစ်လမှာ လေးကြိမ် အပြင်ထွက်စားရင် တစ်ကြိမ်လောက်ပဲထွက်တာမျိုး) ဒါမှမဟုတ် Brand တွေမဝယ်ပဲ စျေးသက်သာမဲ့ ပစ္စည်းကိုအစားထိုးသုံးမလား စသည်ဖြင့်စဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။
၂. Disposable Income: နောက်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့က customer တွေရဲ့ဝင်ငွေကို ဘယ်လိုခွဲဝေသုံးစွဲမလဲ။ မဖြစ်မနေသုံးရမဲ့ အိမ်ငှားဖို့ ၊ အစားအသောက်၊ အဝတ်အစား၊ မီတာခ၊ ဖုန်းဘီလ် ခရီးစားရိတ် စသည်တို့မှာ ဦးစားပေးသုံးပြီး၊ အပိုသုံးငွေ Disposible Income ကိုမှ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပန်းဖြေဖို့၊ ခရီးသွားဖို့၊ သင်တန်းတက်ဖို့ Gym သွားဖို့အတွက် စတဲ့စားရိတ်တွေလျှော့ လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မဖြစ်မနေ သုံးရမဲ့ကိစ္စတွေမှာတောင်မှ စျေးပိုသက်သာတာကို အစားထိုးသုံးစွဲလာနိုင်ပါတယ်။
၃. ပြိုင်ဖက်တွေ : သင့်ပြိုင်ဖက်တွေကတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့စျေးကွက်ကိုတုန့်ပြန်ကြမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ သူတို့ရောင်းအားမကျသွားအောင် ပိုပြီးစျေးသက်သာတဲ့ product တွေကိုထုတ်မလား၊ Sales promotion တွေ Discount တွေပေးပြီးဆွဲဆောင်မလား၊ ပိုပြီးသက်သာပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အရစ်ကျစနစ်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မလား၊ ဒါမဟုတ် အရှုုံးသက်သာအောင်လို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ အရေအတွက်လျော့ချမလား။ စသည်စသည်ဖြင့် စျေးကွက်ကိုတုန့်ပြန်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
၄. ကိုယ်ကိုထိခိုက်မှုသက်သာအောင်ဘာလုပ်မလဲ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တာမျိုး နဲ့ ပစ္စည်းအသစ်တွေထပ်ထုတ်တာမျိုး နဲ့ customer အသစ်ကိုရှာတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်နဲ့ risk ထက်စာရင် လက်ရှိ ဖောက်သည် တွေကိုထိမ်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ်၊။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ မဆိုသူတို့ကို အမြဲတမ်းကိုယ့်ဆီမှာပဲအားပေးအောင်ဆွဲဆောင်ပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပါ။ ပြိုင်ဖက်ဆီကိုမရောက်သွားပါစေနဲ့။ လက်ထဲကကြက်ဥကခြုံထဲက ကြက်မထက်ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
၅. ကုန်ကျစားရိတ်: အများတွေ ကုန်ကစားရိတ်တွေလျော့ချနေ သလိုပဲ ဝင်ငွေနည်းတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကုန်ကျစားရိပ်တွေကို လည်းပြန်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ bonus တွေ ခရီးစားရိတ်တွေ dinner တွေ ပါတီပွဲတွေကို ပြန်သုံးသပ်ပါ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်စားရိတ်က သုံးသင့်တယ် ဘယ်စားရိတ်က မသုံးသင့်ဘူးဆိုတာက ROI နဲ့ချိန်သုံးပါ။ ဒီအချိန်မှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Finance Team ရှိခြင်းက သင့်ကို အများကြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်။
၆. Cashflow is King: မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေမှာ လက်ထဲငွေရှိခြင်းက ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာ ရစရာ ရှိတာတွေ ကို ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ (Discount ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်) ရအောင်လုပ်ပါ။ Bad debt နည်းနိုင်သမျှနည်းပါစေ။ လက်ငင်ဝယ်မဲ့ သူတွေကို credit သမားထက် အရင်ကလျှော့ပေးတာထက်ပိုပြီးပေးပါ။ လက်ထဲမှာ cash flow ထိခိုက်တဲ့အခါ ရနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းတွေ Bank overdraft၊ Bank Loan နဲ့ Trade Financing တွေကို ကြိုတင်စုံစမ်းညှိနှိုင်းထားပါ။
၇။ ဝန်ထမ်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေး : အလုပ်ပါးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေက ပျင်းရိလာတာ စိတ်အားတက်ကြွမှုနည်းလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံးတော့ စီးပွားရေးက Downturn မှာပဲမနေပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ training တွေကို ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြန်ပြီး လုပ်ငန်းတွေအရှိန်နဲ့ပြန်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ တော့ပိုပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ teamကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Dreaming about Passive Income